खट्टा प्याच अंगूर - व्यंजनहरु
सुझावहरू र महान विचारहरू!
के हैश ब्राउन क्यासरोलको साथ राम्रो जान्छ
चिकन आला राजा नुस्खा ढिलो कुकर
खैरो ग्रेवीको साथ स्विस स्टेक कसरी बनाउने
कसरी एक स्किलेट मा एक pizookie बनाउन
© Copyright ©2021 All rights reserved pmc2019.pt | गोपनीयता नीति
खट्टा प्याच अंगूर
खट्टा प्याच अंगूर - कति मजा छ? हामीलाई मन पर्छ ताजा फल सलाद गर्मी मा र सँधै फल खान को लागी अधिक रमाईलो तरीकाहरु खोज्दै हुनुहुन्छ!
रोमाइन र काले सिजर सलाद पनेरा
तपाईंको मनपर्ने बच्चा (हरू), केहि जेल-ओ पाउडर र एक पाउन्ड वा दुई ताजा हरियो वा बैजनी अंगूरहरू समात्नुहोस् र तपाईंको आफ्नै खट्टा प्याच अंगूर क्यान्डी सिर्जना गर्नुहोस्!
तिनीहरू यि वास्तविक फलहरू जस्तै, धेरै धेरै चिनी नखोताम गर्मीमा चिसो हुने उत्तम तरिका हो खरबूजा बेरी पप्प्सिकल्स ! स्लीपओभरका लागि वा फुटबॉल अभ्यास पछि कस्तो रमाईलो र स्वादिष्ट स्नैक्स बनाउन सकिन्छ!
Sour प्याच अंगूर कसरी बनाउने
खट्टा प्याच अंगूर बनाउँदा तपाईं या त रातो वा हरियो अंगूर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म प्रयोग गरिरहेको जेलोको रंगको साथ अ gra्गुर लिन चाहन्छु! हल्का चुना वा कागती स्वादका साथ हरियो अpes्गुर, गाढा बेरी स्वादका साथ रातो अpes्गुर।
अ cold्गुरलाई चिसो पानीमा राम्ररी धुनुहोस् र काण्डहरू हटाउनुहोस्। अ gra्गुरलाई चिसो र भिजेको राख्नुहोस्। एक पानी मिस्टर प्रयोग गर्नुहोला तिनीहरूलाई गीला राख्न, यदि आवश्यक छ भने।
उथलेको थालमा जेलो पाउडरको चाहिएको स्वाद फैलाउँनुहोस् र भिजेको अpes्गुर पाउडरमा रोल गर्नुहोस् जबसम्म तिनीहरू पूर्ण रूपमा लेपित हुँदैनन्।
यसमा चर्मपत्र कागजको साथ बेकिंग प्यानमा खट्टा प्याच अंगूर क्यान्डी सार्नुहोस् र फ्रिजमा राख्नुहोस्। कम्तिमा एक घण्टा वा एक रात चिसो।
तपाइँले तपाइँको खट्टा प्याच अंगुरलाई अतिरिक्त चिसो क्रन्चको लागि स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी तातो दिनमा!
नौसेनी गेडाहरू बनाम महान उत्तरी गेडाहरू
Sour प्याच अंगूर को लागी उत्तम स्वादहरु
मिक्स गर्नुहोस् र स्वादहरू मिलाउनुहोस्! स्ट्रबेरी नींबू पानी वा अनानास सुन्तला प्रयोग गरी हेर्नुहोस्। स्वाभाविक रूपमा, सबै 'खट्टा' स्वादहरू पनि! कागती, खट्टा चेरी वा खट्टा तरबूज सधैं मनपर्ने हुन्छन्!
हामीले यी खट्टा प्याच बच्चाहरू अpes्गुरका लागि एक चम्किलो चुनौना जेलो पाउडर प्रयोग गर्‍यौं! किंडाले मेरो मुखलाई ठक्कर र चिसोको कुरकुरा, क्रिस्पा संयोजनको बारेमा सोच्दै मात्रै बनाउँदछ!
अधिक स्वादिष्ट व्यवहार गर्दछ
डा। पेपर जेलो सलाद - फलले भरिएको रेट्रो मिठाई!
घरेलु केरा पुडिंग - ताजा केराको तहहरू।
घरेलु नुटेला रेसिपी - २० मिनेटमा बनाउनुहोस्!
रास्पबेरी चीज़केक डेजर्ट शूटरहरू - उत्तम नो बेक भागहरू।
तयारी समय१० मिनेट कुल समय१० मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन यी खट्टा प्याच अ gra्गुरहरू द गो मा उत्तम स्नैक्स हुन्! अतिरिक्त क्रन्ची उपचारको लागि उनीहरूलाई चिसो सेवा दिनुहोस्! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ lb अंगूर हरियो वा रातो
▢१ बक्स Jello पाउडर
काण्डबाट सबै अंगूरहरू हटाउनुहोस् र धुनुहोस्।
एउटा सानो कचौरामा जेलो पाउडर राख्नुहोस्
अpes्गुरहरू अझै पनि भिजेको अवस्थामा, तिनीहरूलाई ड्राई जेलो पाउडरमा रोल गर्नुहोस् (पाउडर अ gra्गुरमा अडी रहनेछ)।
एक पकाउने पानाको शीर्षमा एक चिसो र्याकमा राख्नुहोस् र फ्रिजमा राख्नुहोस् कम्तिमा एक घण्टा वा एक रात सुकाउन।
क्यालोरिज:०,कार्बोहाइड्रेट:बीसg,प्रोटिन:१g,मोटो:१g,पागलिएको बोसो:१g,सोडियम:१मिलीग्राम,पोटासियम:१०मिलीग्राम,फाइबर:१g,चिनी:१g,भिटामिन ए:35IU,भिटामिन सी:१.8मिलीग्राम,क्यालसियम:6मिलीग्राम,फलाम:०.२मिलीग्राम
(प्रदान गरिएको पोषण जानकारी एक अनुमान हो र खाना पकाउने विधिहरू र प्रयोग गरिएको सामग्रीको ब्रान्डमा फरक हुनेछ।)
कीवर्डखट्टा प्याच अंगुर कोर्समिठाई पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
सुझाव र महान् विचार!
पम्पकिन पाई क्रिसेन्ट्स
बिस्तारै कुकर बार्बाको गोमांस
सजिलो पम्पकिन बारहरू
भ्यालेन्टाईन डे कुकी पप्स रेसिपी
क्रीम चीज पकाएको आलु
नरिवल कारमेल पोके केक
मिनी चकलेट चिप Scones
टूथपेस्टका लागि महान उपयोगहरू!
क्रीमी टमाटर कुखुरा पास्ता (एउटा भाँडो)
स्ट्रबेरी रेउबरब अपसाइड डाउन केक